Furaha Furaha - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Kooxda Fumax firmware codeing ayaa qori doonta qalab gaar ah oo ku saleysan shuruudaha macaamiisha. Qalabka waxaa lagu diyaarin doonaa qalabka kombuyuutarka ee loo yaqaan 'PCBA' kaasoo ay farsameeyeen kooxda injineernimada Fumax. Shey shaqeynaya oo dhameystiran ayaa loo iibsan doonaa macaamilka si loo xaqiijiyo. Sidee bay u xiiso badan tahay, macaamilku inuu arko fikrad cusub oo ku timaadda wax soo saar dhab ah!
La shaqeynta Fumax, fikradahaaga u jeedi run!
Microcontroller softiweer waa karti udub dhexaad u ah Fumax Tech, iyo wadnaha inta badan alaabada aan ku shaqeyno. Khibrada iyo aqoonta weyn ee Fumax Tech khibraddeeda iyo aqoonteedu waxay ka dhigan tahay inaan awoodno inaan kula talinno ugana faa'iideysanno processor-ka ugu wanaagsan baahiyaha gaarka ah ee macmiil kasta.
Khibraddeennu waxay daboolaysaa dhammaan xulashooyinka microcontroller-ka, laga bilaabo aakhirka aaladaha 8-bit illaa aaladaha sarreeya ee qalabka 32-bit badan.
Fumax Tech waxay hirgelisay boqolaal naqshadood iyadoo la adeegsanayo aalado kala duwan oo 8-bit ah. Maamulayaashan yar-yar ee awoodda badan waxay u adeegi karaan aaladaha durugsan ama waxay kaxaysan karaan dhammaan qalabka wireless-ka ee gacanta lagu qaato. Processor 16-bit inta badan buuxiyo awood u gaar ah u dhexeeya qalabka 8-bit iyo 32-bit. 32-bitka waxqabadka sare wuxuu socodsiin karaa Embedbed Linux® ama Windows Embedded wuxuuna si asaasi ah u taageeri karaa isgaarsiinta Ethernet, bandhigyo waaweyn oo LCD ah, shaashad taabasho, iyo xusuus weyn.
Kooxda softiweerka kumbuyuutarka ee Fumax Tech ayaa kula shaqeynaya inta mashruucaagu socdo. Inta lagu jiro marxaladda dhismaha naqshadeynta waxaan qiimeyneynaa shuruudaha nidaamka waxaanna u doorannaa processor-ka ugu habboon shaqada. Waxaan la shaqeyneynaa kooxda korantada si aan ula midowno softiweerka qalabka, isla markaana aan u sameysano koodh tijaabo ah si aan ugu oggolaano baaritaanka degdegga ah ee looxyada cusub. Waxaan ku taageernaa softiweerka baaritaanka nidaamka waxaanna horumarin karnaa lambarka tijaabada si aan si buuxda u xaqiijino hawlgalka kahor intaan alaabada loo soo rarin rar.
Liiska soo socda ayaa ah shirkadaha MCU ee aan horay u isticmaalnay.
Shirkadaha Western MCU:
- STM, www.stmcu.com.cn
Sumadda Taiwan MCU:
- Holtek, www.holtek.com
MCU maxalliga ah ee Shiinaha:
Hanti Sino, www.sinowealth.com
- STC, www.stcmcudata.com